Wararka Suuqa Maanta: Chelsea oo dalab ka gudbineysa Matthijs de Ligt, Saxiixa Christopher Nkunku iyo Qodobo kale | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Chelsea oo dalab ka gudbineysa Matthijs de Ligt, Saxiixa...
Wararka Suuqa Maanta: Chelsea oo dalab ka gudbineysa Matthijs de Ligt, Saxiixa Christopher Nkunku iyo Qodobo kale
Aston Villa iyo weeraryahanka England Ollie Watkins, oo 25 jir ah, ayaa ku jira liiska xulashooyinka Tottenham . (Fichajes)
Chelsea ayaa isku diyaarinaysa inay dalab dhan 120 milyan oo euro (£ 102m) ka gudbiso daafaca Juventus iyo Netherlands ee Matthijs de Ligt, oo 22 jir ah (AS).
Laakiin Chelsea ayaa tartan kala kulmeysa Juventus oo dooneysa 21-jirka AS Monaco iyo xulka France Aurelien Tchouameni. (Calciomercato)
Agaasimaha isboortiga Bayern Munich Hasan Salihamidzic ayaa kooxda ka fogeeyay wararka la xiriirinaya Chelsea iyo 28 jirka daafaca dhexe ee Jarmalka Antonio Rudiger. (DAZN)
Tottenham ayaa mabda ’ahaan heshiis kula jirtay inay daafaca dhexe ee Spain Pau Torres kala soo wareegto Villarreal xagaagii, laakiin 24-jirkan ayaa“ doorbiday inuu sugo dalab ka wanaagsan ”. (AS)
Kooxda Man City ayaa doonaysa saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda RB Leipzig ee reer France Christopher Nkunku oo 23 jir ah (TEAMtalk)
Bartilmaameedka Manchester City iyo weeraryahanka reer Serbia Dusan Vlahovic, oo 21 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu wadahadalo qandaraas cusub ah la furo Fiorentina . (Manchester Evening News )
Leicester City ayaa xiiso u muujisay xiddiga qadka dhexe ee reer Lazio Luis Alberto, oo 28 jir ah (Fichajes)
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa amaanay ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Portugal Bernardo Silva ka dib guushii ay Sabtidii ka gaareen Chelsea, laakiin ma xaqiijin doono in 27 jirkaan uu weli doonayo inuu ka tago kooxda. (Inews)
Milkiilaha Manchester United Joel Glazer ayaa si maldahan u sheegay in kooxdu ay sii wadi doonto qarashka badan, isagoo yiri “mar walba waxaa jira shaqo badan oo la qabanayo”. (thesun)
Juventus ayaa ka fiirsaneysa inay bisha Janaayo u dhaqaaqdo xiddiga qadka dhexe ee Borussia Dortmund iyo Belgium Axel Witsel, oo 32 jir ah (Calciomercato)
Madaxa fulinta ee kooxda Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ayaa sheegay in waqti la’aanta ciyaarta ee uu siiyay garabka reer England Jadon Sancho, oo 21 jir ah, Manchester United “ay dhaawaceyso naftiisa”. (Express)
Cristiano Ronaldo ayaa doonaya inuu ka fariisto Manchester United . 36 jirka reer Portugal ayaa markaas doonaya inuu door tababare ka noqdo kooxda. (thesun)
Previous articleGary Neville oo soo bandhigay Sabab aysan Man United ugu guuleysan karin Horyaalka
Next articleWakiilka Salah oo soo saaray jawaabta ay sugayeen Maamulka Kooxda Liverpool